Ampaherezo ny hetsikao amin'ny Icebreaker
Raha mpitantana ekipa vaovao ianao na manao famelabelarana any amin'ny efitranon'olon-tsy fantatra, dia atombohy amin'ny mpanapaka ranomandry ny lahateninao. Ny fampidirana ny lohahevitry ny lahateninao, ny fivoriana, na ny fihaonambe miaraka amin'ny hetsika fanafanana dia hamorona rivo-piainana milamina sy hampitombo ny saina. Fomba tsara ahafahana...
Tombontsoa amin'ny fianarana nomerika
Ny fianarana dizitaly dia ampiasaina manerana an'ity torolalana ity mba hanondroana fianarana izay mampiasa fitaovana sy loharano nomerika, na aiza na aiza misy izany. Ny teknolojia sy ny fitaovana nomerika dia afaka manampy ny zanakao hianatra amin'ny fomba mety amin'ny zanakao. Ireo fitaovana ireo dia afaka manampy amin'ny fanovana ny fomba fanolorana votoaty sy ny fomba ...
Ny rafi-panabeazana ankehitriny dia tsy ampy amin'ny fananganana ny toetran'ny mpianatra
“Andraikitry ny mpampianatra sy ny andrim-panjakana ny mampiofana ny mpianatra sy manomana azy ireo handray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena, izay tokony ho anisan’ny tanjona lehibe indrindra amin’ny fanabeazana” : ny mpitsara Ramana, mpitsara ambony indrindra ao amin’ny Fitsarana Tampony NV Ramana, izay manana ny anarany. dia, tamin'ny 24 martsa, natolotry ny CJ...
Tsy vaovao intsony ny fianarana lavitra
Ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF dia nahatsikaritra fa ny 94%-n'ny firenena dia nampihatra karazana fianarana lavitra rehefa nakatona ny sekoly COVID-19 tamin'ny lohataona lasa teo, anisan'izany ny any Etazonia. Tsy vao sambany no nikorontana ny fampianarana tany Etazonia – na sambany no nampiasain'ny mpanabe ny fianarana lavitra. Ao amin'ny...
Ny politikan'ny fampihenana indroa ao Shina dia rivo-doza lehibe ho an'ny andrim-piofanana
Ny Filankevi-panjakana ao Shina sy ny komity foiben'ny Antoko dia niara-namoaka andiana fitsipika mikendry ny hampihenana ny sehatra midadasika izay niroborobo noho ny famatsiam-bola goavana avy amin'ireo mpampiasa vola manerantany sy ny fandaniam-bola tsy mitsaha-mitombo avy amin'ireo fianakaviana miady mba hanampiana ny zanany hahazo toerana tsara kokoa...
Ahoana no hanampiana ny mpianatra hanitsy ny fiainana an-tsekoly vaovao
Heverinao ve fa azo atao ve ny manomana ny zanakao amin'ny fanombohana vaovao? Efa ampy taona ve izy ireo mba hivezivezy amin'ny rano sarotra misy fiovana eo amin'ny fiainany? Ry namana, eto aho anio hilaza fa azo atao izany. Ny zanakao dia afaka miditra amin'ny toe-javatra vaovao vonona ara-pihetseham-po hiatrika ny fanamby ...
Inona no karazana fiovana hitranga rehefa miditra an-tsekoly ny faharanitan-tsaina artifisialy?
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-12
Ny fitambaran'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fanabeazana dia nanjary tsy azo sakanana ary niteraka fahafaha-manao tsy voafetra. Inona no fiovana manan-tsaina fantatrao momba izany? "Ecran iray" tablette interactive marani-tsaina miditra ny efitrano fianarana, manova ny fampianarana boky mahazatra; “Lens iray...
Miara-miasa amin'ny tontolon'ny écran touchée interactive
Ny tontonana ecran touche interactive (ITSP) dia omena ary omena ny fomba ataon'ny ITSP. Ny ITSP dia natsangana mba hanao fomba ahafahan'ny mpanolotra na ny mpampianatra manoratra, mirakitra, ary mampianatra avy amin'ny fampidirana na rindrambaiko eo amin'ny tontonana. Ho fanampin'izany, ny ITSP dia namboarina mba hampiharana ...
Ny fampiasana ARS dia mampitombo ny fandraisana anjara
Amin'izao fotoana izao, ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin'ny fandaharam-pampianarana dia manondro fandrosoana lehibe amin'ny fanabeazana ara-pitsaboana. Misy fivoarana lehibe eo amin'ny fanombanana formative miaraka amin'ny fampiharana ny teknolojia fanabeazana maro. Toy ny fampiasana rafitra famaliana ny mpihaino (ARS) ...
Inona no atao hoe fifandraisana mahomby ao an-dakilasy?
Ao amin'ny taratasin'ny fomba fijery ara-panabeazana, manam-pahaizana maro no nilaza fa ny fifandraisana mahomby eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra amin'ny fampianarana dia iray amin'ireo fepetra manan-danja amin'ny fanombanana ny kalitaon'ny fampianarana any an-dakilasy. Saingy ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny fifandraisana an-dakilasy dia mitaky educato...